5 Zviratidzo Zvingavhiringidza Kudzivirira Kuita Zvekunyengedza Kuita & mdash; Semalt Expert Concerned
Izwi rokuti 'phishing' rinoreva maitiro emashandisirwo anoshandiswa nevapanduki vekunyora kuti vashandise zvikwereti uye / kana kuwana ruzivo rwekadhi rechikwereti, ruzivo rwebhangi, mapiwedi, kana mamwe mazano anokosha. Icho chimiro chekuzivikanwa kwekuzivikanwa, uye inotangira nguva ye internet (phishing scams inoshandiswa kupedzerwa pamusoro pefoni, somuenzaniso).
Mukutanga kwegore ra20166, paiva nehuwandu hwakawanda hwekutengesa kupesana kupfuura pane imwe nzvimbo munhoroondo, zvichienderana maererano neAPWG (Anti-Phishing Working Group). Saka idambudziko guru, uye humwe humwe uchapupu hunoratidza kuti zvinongowedzera kuipa.
VaKybercriminals uye vanonyangadza vanogara vachitsvaga zvinyorwa zviri nyore. Kazhinji kazhinji kwete, vanotambura vanoita sokuti vanozvipira ivo pachavo nekusaziva - verpackungsmaterial umzugskartons. Kunyange zvakadaro, ane zvombo zvishoma tech savviness uye commonsense, zviri nyore kudzivisa zvirongwa zvekunyengera.
Mutengi Wekubudirira MuKitereji we Semalt , Oliver King, anorondedzera zvishanu zvishoma 'mitemo yegumbo' kuti uone kuti iwe kana sangano rako hamuna kunetswa nemaitiro ekunyengera.
1. Tarisa HTTPS uye Icon 'Icon' Icon
Kana peji yewebhu ye URL (iyo inoreva kuti "Uniform Resource Locator" nenzira) inotanga ne https: // (Hypertext Transfer Protocol Secure) uye ine chiratidzo chekuvhara mubhuro rebhu, zvino unoziva kuti yakachengeteka uye yakachengeteka. Iwe haufaniri kutumira chero chero ruzivo rwemashoko kune imwe nzvimbo isina zvinhu izvi zviviri zvinokosha.
2. Ivai Nenyongedzo yeWiFi yeHuzhinji
Usamboita bhizinesi yako yepaIndaneti, shandisa iyo PayPal account, kana kuisa chero mamwe mapepa emaIndaneti paunenge uchishandisa WiFi yevanhu vose..Pasinei nokuti iyo yekutengesa kusununguka pamisika yekutengesa, raibhurari, hofisi yepamusoro-soro kana imwe nzvimbo yevoruzhinji inonyanya kushandiswa, izvi ndizvo chaizvo zvinyorwa zvinowanzoitwa nevatadzi vekunyora. Zvimwe, nekubatsirwa kweVPN (Virtual Private3 Network) haufaniri kuva izwi rechikwata hacker kuti uwane ruzivo pane network. Kana iwe uchifanira kuwana mashoko ekudzivirirwa kwepawedi yepawedi mukati memaitiro aya, shandisa smartphone yako kana tablet ye 3 / 4G kana LTE connection.
Chero chero rudzi rwekfupicode rinofanira kutaridzwa nehumwe unofungidzira, zvikurukuru pa FaceBook. Pamusoro pe Twitter, zvinonzwisisika kushandisa shortcodes sezvo kune chikamu chemavara 140 pamusana, asi pane dzimwe nzvimbo, kushandiswa kwekubatanidzwa kunopfupiswa ne bit.ly kana imwe purogiramu shortcode yakaisvonaka dodgy. Zvinogona kunge zvakapararira kuparadzirwa kwepamu zvinogona kukusiya iwe uchinetseka kune malware.
4. Typos uye Broken Shona
Izvo izvi zvakajeka zvokuti hazvina kunyatsokosha kutaura. Zvinoshamisa kunyange zvazvo dzakawanda zvepamusoro uye zvakanyanyisa zvigadzirwa zvekuita zvekuita kuChina, India, neRussia hazvina kutora nguva yekugadzirisa unyanzvi hwavo hwekunyora kweChirungu. Kana pane zvinyorwa zvakajeka uye / kana weird salutations ("Anodiwa Mudiwa Wakatengesa", nezvimwewo) mune imwe nhepfenyuro yenyaya yeEndaneti, ipapo vimba chimiro chako uye chese.
Zvakare zvakare, zvichida vadzidzisi vematareji vanoziva vachida kutiteterera nekinyorwa chavo chakanyanyisa, nokuti kune runyerekuro kuti PLA Unit 61398 yeChina Government (google iyo kune mamwe maverengi anofadza) kutumira pachena pachena phishing emails ezvo ndokugara pasi uye track iyo inovhura.
5. Hapana Chinove Chichikurumidzira
Muna 2014, mutengesi wepaIndaneti paBay akakurudzira vese vashandisi vavo kuti vachinje mapepa emafaira sezvo vainge vaona kutyora kwepamusoro kwepa data.
Izvo zvakanga zvakashamisa, zvisinei, uye chokwadi chechinhu ndechekuti idzi mavara emakondomu ekutsvaga maitiro anowanzova chiratidzo chekuita zvepenzi. Saka funga kaviri usati wapindura nyevero inokurumidza. Iwe unogona kunge uchida kubatanidza rubatsiro rwekambani kugonesa kudai kwakadaro.